Apex Legends ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Patch 3.2 Update. – Gaming Noodle
Apex Legends Update Patch 3.2 Update
နောကျပိုငျးထှကျရှိလာတဲ့ Battle Royale Video game တှထေဲမှာ Electronic Arts ရဲ့ Apex Legends ဟာလညျး လူကွိုကျမြားပွီး အောငျမွငျတဲ့ Battle Royale Game တဈခုလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ သကျတမျးနုနယျသေးတဲ့ Free-to-play PC game တဈခုဖွဈတာနဲ့အညီ Apex Legends ဟာ ကစားသမားအကွိုကျ Update တှေ၊ Event တှနေဲ့ Battlepass တှေ ဆကျတိုကျဆိုသလို ထုတျပေးလကျြရှိပါတယျ။
လကျရှိ Ongoing Apex Legends Ranked Season3ဟာ (၄) လ ခနျ့ ကွာမွငျ့မှာဖွဈပွီး January အကုနျမှာ ပွီးဆုံးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Season အသဈနဲ့အတူ Battlepass အသဈ မလာခငျမှာ ကစားတဲ့ player တှအေတှကျ မပငျြးရလအေောငျ EA ဟာ ကွားထိုး Event မြား ထညျ့သှငျးပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ Event တဈခုအနနေဲ့ မလာသေးဘဲ Game Update အကွီးစား တဈခုကို ဒီနေ့ မနကျမှာ ထုတျပေးခဲ့ပါတယျ။ Game File Size ကတော့ 3.93 Gb ရှိပါတယျ။
၁။ Player Level နှငျ့ Free Apex Packs မြား
Player Level Cap ကို Maximum 100 မှ 500 အထိ တိုးမွှငျ့ပေးလိုကျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Level တကျရငျ တကျလာသလောကျ Free Apex Pack မြားကို ဆကျလကျရှိရမှာဖွဈပါတယျ။
Lvl2– 20 အတှငျး = Level တဈဆငျ့ တကျတိုငျး 1 Apex Pack
Lvl 22 – 300 အတှငျး = Level နှဈဆငျ့ တကျတိုငျး 1 Apex Pack
Lvl 305 – 500 အတှငျး = Level ငါးဆငျ့ တကျတိုငျး 1 Apex Pack ဆိုပွီး ရရှိသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Apex Legends ကို ပုံမှနျဆော့တဲ့ Player တဈယောကျဟာ Account Level 500 ရောကျတဲ့အထိ ဆော့မယျဆိုရငျ စုစုပေါငျး Apex Packs 199 ခု ရရှိသှားမှာဖွဈပါတယျ။
၂။ New Gun Charms
လကျရှိ Gun တှမှော ခြိတျဆှဲလို့ရတဲ့ Gun Charms (Key chain) တှဟော စုစုပေါငျး (၉) ခု ခနျ့ရှိပါတယျ။ Fight or Fright Event နှငျ့ Season3Battlepass အားလုံးပေါငျးမှ Gun Charms (၉) ခုသာ ရှိခဲ့ပမေယျ့ အခု Update မှာတော့ Free Apex Pack တှနေဲ့အတူ Gun Charms Key Chain အသဈ (၃၆) ခုကို ထညျ့သှငျးပေးလာတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ Legendary Bubblehead Keychain တို့အပွငျ Med Kit, Supply Bin, Arc Star, Granade, Deathbox စသညျဖွငျ့ Ingame မှာ မွငျနကွေ Item မြားနှငျ့ Bloodhound knife, Pathfinder Grapple hook, Bangalore Missile တို့လို Legends iconic item မြားကိုလညျး ဒီ (၃၆) ခုသော Key Chain တှအေဖွဈ ထညျ့သှငျးပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
၃။ Peacekeeper Nerf hints.
အရမျး Powerful ဖွဈလှနျးတဲ့ Peacekeeper ဟာ အခုခြိနျအထိ ဆကျတိုကျ Nerf ခံနရေပမေယျ့ သိပျမကွာခငျမှာလညျး ထပျ Nerf မယျ့အကွောငျး အရိပျအမွှတျပွောထားပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ Peacekeeper ဟာ Meta အပွငျကို ရောကျဖို့ အလားအလာ တျောတျောမြားတဲ့ Item တဈခုဖွဈလာပါပွီ။
၄။ Ingame Changes
Colorblind ကစားသမားမြားအတှကျ Helment နှငျ့ Armor အတှကျ Improvement မြား၊ Deathbox looting လုပျနခြေိနျမှာ Damage ထိမထိ သိနိုငျမယျ့ Setting အသဈတဈခု၊ Console player မြားအတှကျ Auto Sprint Improvement ၊ Lifeline Heirloom Animation ၊ “Thank you” response bug fix ၊ Gold Armor ရရှိနိုငျခကြေို လြှော့ခခြွငျး နှငျ့ အရေးအကွီးဆုံးတဈခုအဖွဈ Finisher ကို Cancel လုပျနိုငျမယျ့ Buttom တဈခုကို ထညျ့သှငျးပေးခွငျး စသညျတို့ ပွောငျးလဲ ထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အခွားသော Bug Fixed ပေါငျးမြားစှာနှငျ့ Knockdown shield တို့ရဲ့ HP ကိုလညျး Common 200 HP, Rare 450 HP နှငျ့ Shield သုံးထားတဲ့အခြိနျမှာ လမျးလြှောကျတဲ့ နှုနျးကိုလညျး အနညျးငယျမွနျပေးထားပါတယျ။
၅။ Firing Range Update
Practice Mode အသဈတဈခုဖွဈတဲ့ Firing Range မှာ 1 vs 1 ဆော့ခှငျ့ကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ မိမိ နဲ့ Friend တဈယောကျ စိတျတိုငျးကြ Gun တှေ ကိုငျပွီး လကေ့ငျြ့ခှငျ့ရရှိမယျ့အတှကျ Apex Legends ကို အသဈရောကျလာမယျ့ ကစားသမားကို Apex Legends game အကွောငျးကို သခြောသငျပေးနိုငျမယျ့ အပွောငျးအလဲတဈခုလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
၆။ Wattson’s Ultimate Buff
Wattson’s ရဲ့ Ultimate ဟာ Shield Regeneration အပွငျ Granade, Calldown rocket ကံသို့သော Projectile မြားကို ကာကှယျပေးတဲ့ Aura တဈခုလညျးပါဝငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ Aura ဟာ Granade အားလုံးကို ဖကျြစီးပဈတဲ့အတှကျ မိမိအသငျးက ပဈလှတျလိုကျတဲ့ Granade တှကေိုပါ ဖကျြစီးခွငျးက သူ့ရဲ့ အားနညျးခကျြလို ဖွဈနခေဲ့တာပါ။ အခု update မှာတော Watton နဲ့ သူ့ရဲ့ Allied Legends တှဟော Wattson Ultimate ရဲ့ Zone ထဲကနေ ပဈလှတျလိုကျတဲ့ Granade မြားကိုတှကေိုတော့ ဖကျြဆီး ပဈတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
၇။ Free BP-1 Pathfinder Free Skin
Patch 3.2 ကို Download ဆှဲသူတိုငျးအတှကျ EA ရဲ့ အသဈထှကျရှိထားတဲ့ Star Wars Jedi: Fallen Order ထဲက BD-1 Character ကို Inspire ယူပွီး ဖနျတီးထားတဲ့ Pathfinder ရဲ့ New Skin BP-1 ကို လကျဆောငျပေးထားပါတယျ။
ဒီ Update ရဲ့ အနှဈခြူပျကတော့ Account Level ကနေ Apex Pack အသဈမြား ရရှိနိုငျမယျ့ အခကျြက အဓိဖွဈပွီး
Update ဟာ File Size ကွီးမားပမေယျ့ ပါဝငျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေတော့ နညျးပါးတယျလို့ ထငျရပါတယျ။ ဒါကလညျး EA ဟာ Update တဈခုနဲ့အတူ Data အသဈတှေ ထညျ့သှငျးပေးလိုကျပမေယျ့ တဈခါတညျး ထုတျမပေးသေးတာကွောငျ့ ဒီလောကျပဲ သိနိုငျသေးတာဖွဈပါတယျ။ သိပျမကွာခငျမှာ Apex Legends ရဲ့ နာမညျကွီး Data miner တှကေလညျး ဒီ Update ထဲမှာ ပါဝငျပွီး ထုတျမပေးသေးတဲ့ အခကျြတှကေို ဖျောသှားပေးဦးမှာ သခြောပါတယျ။
#GamingNoodle #ApexLegends #3.2Update
နောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာတဲ့ Battle Royale Video game တွေထဲမှာ Electronic Arts ရဲ့ Apex Legends ဟာလည်း လူကြိုက်များပြီး အောင်မြင်တဲ့ Battle Royale Game တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သက်တမ်းနုနယ်သေးတဲ့ Free-to-play PC game တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ Apex Legends ဟာ ကစားသမားအကြိုက် Update တွေ၊ Event တွေနဲ့ Battlepass တွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ Ongoing Apex Legends Ranked Season3ဟာ (၄) လ ခန့် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး January အကုန်မှာ ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Season အသစ်နဲ့အတူ Battlepass အသစ် မလာခင်မှာ ကစားတဲ့ player တွေအတွက် မပျင်းရလေအောင် EA ဟာ ကြားထိုး Event များ ထည့်သွင်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Event တစ်ခုအနေနဲ့ မလာသေးဘဲ Game Update အကြီးစား တစ်ခုကို ဒီနေ့ မနက်မှာ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Game File Size ကတော့ 3.93 Gb ရှိပါတယ်။
၁။ Player Level နှင့် Free Apex Packs များ
Player Level Cap ကို Maximum 100 မှ 500 အထိ တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Level တက်ရင် တက်လာသလောက် Free Apex Pack များကို ဆက်လက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Lvl2– 20 အတွင်း = Level တစ်ဆင့် တက်တိုင်း 1 Apex Pack
Lvl 22 – 300 အတွင်း = Level နှစ်ဆင့် တက်တိုင်း 1 Apex Pack
Lvl 305 – 500 အတွင်း = Level ငါးဆင့် တက်တိုင်း 1 Apex Pack ဆိုပြီး ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Apex Legends ကို ပုံမှန်ဆော့တဲ့ Player တစ်ယောက်ဟာ Account Level 500 ရောက်တဲ့အထိ ဆော့မယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း Apex Packs 199 ခု ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ Gun တွေမှာ ချိတ်ဆွဲလို့ရတဲ့ Gun Charms (Key chain) တွေဟာ စုစုပေါင်း (၉) ခု ခန့်ရှိပါတယ်။ Fight or Fright Event နှင့် Season3Battlepass အားလုံးပေါင်းမှ Gun Charms (၉) ခုသာ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခု Update မှာတော့ Free Apex Pack တွေနဲ့အတူ Gun Charms Key Chain အသစ် (၃၆) ခုကို ထည့်သွင်းပေးလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ Legendary Bubblehead Keychain တို့အပြင် Med Kit, Supply Bin, Arc Star, Granade, Deathbox စသည်ဖြင့် Ingame မှာ မြင်နေကြ Item များနှင့် Bloodhound knife, Pathfinder Grapple hook, Bangalore Missile တို့လို Legends iconic item များကိုလည်း ဒီ (၃၆) ခုသော Key Chain တွေအဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်း Powerful ဖြစ်လွန်းတဲ့ Peacekeeper ဟာ အခုချိန်အထိ ဆက်တိုက် Nerf ခံနေရပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာလည်း ထပ် Nerf မယ့်အကြောင်း အရိပ်အမြွတ်ပြောထားပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် Peacekeeper ဟာ Meta အပြင်ကို ရောက်ဖို့ အလားအလာ တော်တော်များတဲ့ Item တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။
Colorblind ကစားသမားများအတွက် Helment နှင့် Armor အတွက် Improvement များ၊ Deathbox looting လုပ်နေချိန်မှာ Damage ထိမထိ သိနိုင်မယ့် Setting အသစ်တစ်ခု၊ Console player များအတွက် Auto Sprint Improvement ၊ Lifeline Heirloom Animation ၊ “Thank you” response bug fix ၊ Gold Armor ရရှိနိုင်ချေကို လျှော့ချခြင်း နှင့် အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုအဖြစ် Finisher ကို Cancel လုပ်နိုင်မယ့် Buttom တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးခြင်း စသည်တို့ ပြောင်းလဲ ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခြားသော Bug Fixed ပေါင်းများစွာနှင့် Knockdown shield တို့ရဲ့ HP ကိုလည်း Common 200 HP, Rare 450 HP နှင့် Shield သုံးထားတဲ့အချိန်မှာ လမ်းလျှောက်တဲ့ နှုန်းကိုလည်း အနည်းငယ်မြန်ပေးထားပါတယ်။
Practice Mode အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Firing Range မှာ 1 vs 1 ဆော့ခွင့်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ မိမိ နဲ့ Friend တစ်ယောက် စိတ်တိုင်းကျ Gun တွေ ကိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ခွင့်ရရှိမယ့်အတွက် Apex Legends ကို အသစ်ရောက်လာမယ့် ကစားသမားကို Apex Legends game အကြောင်းကို သေချာသင်ပေးနိုင်မယ့် အပြောင်းအလဲတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Wattson’s ရဲ့ Ultimate ဟာ Shield Regeneration အပြင် Granade, Calldown rocket ကံသို့သော Projectile များကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Aura တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Aura ဟာ Granade အားလုံးကို ဖျက်စီးပစ်တဲ့အတွက် မိမိအသင်းက ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ Granade တွေကိုပါ ဖျက်စီးခြင်းက သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်လို ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ အခု update မှာတော Watton နဲ့ သူ့ရဲ့ Allied Legends တွေဟာ Wattson Ultimate ရဲ့ Zone ထဲကနေ ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ Granade များကိုတွေကိုတော့ ဖျက်ဆီး ပစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Patch 3.2 ကို Download ဆွဲသူတိုင်းအတွက် EA ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Star Wars Jedi: Fallen Order ထဲက BD-1 Character ကို Inspire ယူပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Pathfinder ရဲ့ New Skin BP-1 ကို လက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ Update ရဲ့ အနှစ်ချူပ်ကတော့ Account Level ကနေ Apex Pack အသစ်များ ရရှိနိုင်မယ့် အချက်က အဓိဖြစ်ပြီး
Update ဟာ File Size ကြီးမားပေမယ့် ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ နည်းပါးတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါကလည်း EA ဟာ Update တစ်ခုနဲ့အတူ Data အသစ်တွေ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပေမယ့် တစ်ခါတည်း ထုတ်မပေးသေးတာကြောင့် ဒီလောက်ပဲ သိနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ Apex Legends ရဲ့ နာမည်ကြီး Data miner တွေကလည်း ဒီ Update ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ထုတ်မပေးသေးတဲ့ အချက်တွေကို ဖော်သွားပေးဦးမှာ သေချာပါတယ်။
#GamingNoodle #ApexLegends #Dec3Update